Akụkọ - Otu esi azụta mkpisi kwụ ọtọ na kehoraizin
Otu esi azụta mma elu kwụ ọtọ na kehoraizin
Ma ọ bụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye ọrụ, mgbe ịzụrụ akụrụngwa buru ibu, ọ ga-enwerịrị mmasị na ọnụahịa ahụ. Dị ka otu akụrụngwa dị mkpa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọnụ ahịa ịbelata na ịbe ihe dị oke ọnụ, yabụ ndị ọrụ na-azụta m na-akpachapụ anya karịa mgbe m mere. N'ezie, ọnụ ahịa ngwaọrụ nwere ọtụtụ ihe. Ndị ọrụ nwere ahụmịhe emeela nyocha dị mfe maka onye ọ bụla site n'ọtụtụ akụkụ. Site na nyocha na -esote, ị ga -amụtakwu.
Nke mbụ, ika ga -ekpebi ọnụ ahịa ya. Ugbu a enwere ọtụtụ ụdị akụrụngwa, ma ọ bụ ebubatara ya ma ọ bụ emepụtara ya n'ime ụlọ, nke ndị ọrụ ji kpọrọ ihe nke ukwuu. Mgbe ị na-ahọrọ, ọ bụrụ na ama ama ama ama, ọnụahịa ahụ ga-adị oke ọnụ. Obere azụmaahịa ka dị njikere ịhọrọ ụdị ndị nkịtị, nke mere na ọ bụghị naanị na ọnụahịa dị ọnụ ala, mana ọrụ akụrụngwa nke ụdị nkịtị ezukwara.
Ọrụ na arụmọrụ na-emetụtakwa ọnụ ahịa slitting na cross-cut. Ọrụ na arụmọrụ akụrụngwa ugbu a dị iche, ma e jiri ya tụnyere ngwa ọdịnala emezila nke ukwuu, yabụ mgbe onye ọrụ họọrọ, ọ ga -agwakọta mkpa ya n'ezie. Banyere ma ọtụtụ ọrụ, nke ka mma, nke a adịchaghị otú ahụ. Ọ bụrụ na obere azụmaahịa zụrụ ngwaọrụ nwere ọtụtụ ọrụ, anaghị arụ ọtụtụ ọrụ, mana ọ bụ ihe efu.
Ebe mmepụta ga -emetụta ọnụahịa. Ugbu a, na mgbakwunye na akụrụngwa arụpụtara n'ime ụlọ, ọtụtụ ngwa mbubata ejirila nwayọọ nwayọọ banye n'ahịa ndị China, ndị ọrụ wee too ha nke ukwuu. Ọtụtụ n'ime ngwa ndị a na -ebubata ga -adị ọnụ karịa. E kwuwerị, ha ga -akwụrịrị ụgwọ tupu ha abanye n'ahịa ndị China. Ụtụ isi na ụgwọ, yabụ ọnụahịa ga -adị oke ọnụ karịa. Ọtụtụ ndị ọrụ ga -atụkwasịkarị obi na ngwa ndị mbubata, ọkachasị n'ihi na ha kwenyere na akụrụngwa ebubata na -eji teknụzụ ka mma. N'ezie, nyocha ụlọ na teknụzụ mmepe emewokwa nnukwu ọganihu, ọbụnadị ụfọdụ ndị nrụpụta nwere teknụzụ ka mma karịa akụrụngwa mbubata. Ndị ọrụ nwere ike itule akụrụngwa sitere na mmalite dị iche iche wee hụ ọdịiche doro anya.
Ọnụahịa nke ịchacha na ịbefe nwere ọtụtụ ihe. Ndị ọrụ ga -ahọrọrịrị onye nrụpụta mgbe niile mgbe ịzụrụ, ka ị ghara ịduhie. Ndị nrụpụta Jinggong nke ndị ọrụ tụrụ aro maka onye ọ bụla na-enye akụrụngwa dị elu yana ezigbo ọrụ ire ahịa. Ha nwere ike nyere ndị ọrụ aka dozie nsogbu dị iche iche n'oge usoro ịzụrụ ihe niile yana nwee ahụmịhe ka mma.
Ewepụla mpịakọta na -arụ ọrụ nke igwe kwụ ọtọ na -arụpụta mpempe akwụkwọ ụgbọ ala na akwa mmanụ galvanized ogologo oge. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ na -arụ ọrụ enweghị ndị ọrụ akụrụngwa ọkachamara, ịtọpụ igwe na -agbacha agbacha bụ nsogbu siri ike, na ha anaghị anwa anwa ịkwasa ngwa ngwa. Ihe omume a ga-eme mgbe nchịkọta ogologo oge gachara.
Maka ọnọdụ a, ọ dị mkpa ịsachapụ n'oge wee gbasasịa ma rụzigharịa ya. Na mgbakwunye, enwere isi nsogbu. N'ime usoro nhicha mpịakọta ọrụ nke leveler, ị ga -enyocha akwa nkuku ejiri. Ahapụkwala akwa nkuku ahụ na leveler wee rụọ ọrụ. The n'elu ekweghị ekwe nke ala bụ nnọọ elu. Agbala efere nchara siri ike. Ọ bụrụ na a hapụrụ akwa nkuku ahụ na rolale ahụ dị larịị, akwa nkuku ga -etegide ya na rola ma mepụta ọkụ mgbe arụ ọrụ bidoro, nke ga -eyi elu mpịakọta ọrụ, dị ka egosiri na foto dị n'okpuru. , Ọ ga -emepụta embossing n'elu efere nchara.
Na mgbakwunye, nhọrọ nke ihe na ọgwụgwọ ọkụ nke mpịakọta ọrụ dịkwa oke mkpa. Ọ bụrụ na ihe ahọpụtara na isi ike adịghị mma, ụdịrị nsogbu ahụ ga -eme n'oge adịghị anya n'ihi iyi.
Enwere ike ịme nhicha nke leveler ozugbo ozugbo dabere na isi ihe ndị a:
1. Hichaa sludge na leveler n'oge.
2. Jiri ihe kwesịrị ekwesị mgbe ị na -ehicha ma na -ekpochapụ leveler, gụọ tupu ojiji, ma gụọ mgbe ejiri ya. Ekwela ka akwa nkuku ngwa ngwa daba na ọkwa. Ọ bụrụ na ịnweghị ike iwepụta ya, kpọtụrụ ndị na -ahụ maka akụrụngwa n'oge na amanyela ya.
3. Tupu imeputa ihe, gee ntị ka ị lelee otele ma hichaa ya n'oge ma ọ bụrụ na enwere mpekere.
4. Lelee nrụgide ikuku nke rollers na uncoilers niile tupu imepụta ya, ma jiri mgbali ikuku kwesịrị ekwesị dabere na ngwaahịa dị iche iche.
Hebei Kieshun Door Industry Equipment Co., Ltd. bụ onye nrụpụta ụlọ mbụ nke mpempe akwụkwọ mpịakọta na -akpụ igwe na akụrụngwa, yana isi ụlọ nrụpụta na mmepụta nke ọnụ ụzọ na ngwa windo na China. Ụlọ ọrụ ahụ na-agbaso ụkpụrụ nke ịdị mma, iguzosi ike n'ezi ihe, na ihe ọhụrụ, na-enye ndị ahịa ngwaahịa dị elu yana ọrụ ịre ahịa zuru oke na atụmatụ imewe ezi uche yana nhazi nhazi na ịdị mma nke ọgbakọ.
Anyị ụlọ ọrụ specializes na n'ichepụta: ọkụ ụzọ nzukọ akara ngwá, mgbochi na-ezu ohi ụzọ nzukọ nzukọ ngwá, ọkụ window akụrụngwa, na dị iche iche oyi-kpụrụ akpụ akụrụngwa. A na -anabata ndị isi si n'akụkụ ụwa niile ka ha bịa leta ma kpaa nkata azụmahịa.
Oge ezipụ: Jul-15-2021
Mpaghara mmepe akụ na ụba Chengdong, Wuqiang County, Hengshui, Mpaghara Hebei